10% Discount For All Menu at Aroma2India Food, Bagan
10% Discount For All Menu at Aroma2India Food, Bagan အသေးစိတ်
သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်ပြီး အရသာမှာလျှာလည်သွားမယ့် အိန္ဒိယအစားသောက်များရရှိရာနေရာ Aroma (2) Restaurants
ဒီဆိုင်လေးကတော့ ယာခင်းသာလမ်း၊ ပုဂံမြို့မှာ ရှိပြီးတော့ B&F Club Card နဲ့သွားရောက်အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ All Menu 10% Discount ရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်…
အိန္ဒိယအစားသောက်တွေ အဓိကရရှိပြီးတော့ ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ဖို့အတွက် အချိုမုန့်ကို လုံးဝထည့်သွင်းထားခြင်းမရှိသလို အရသာကိုလည်း လုံးဝ Perfect ဖြစ်အောင် ချက်ပြုတ်ပြင် ဆင်ထားတဲ့အတွက် အရသာလည်းရှိမယ်၊ အဟာရနဲ့လည်း ပြည်စုံတဲ့ စားသောက်ဖွယ်ရာများကို သုံးဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်…
ဒါ့အပြင် ဒီဆိုင်ရဲ့ထူးခြားချက်လေးက ယခုခေတ် ဆိုင်တော်တော်များများက Wifi တွေတပ်ဆင်ပေးထားသော်လည်း ဒီဆိုင်မှာ ကျတော့ Wifi ကင်းမဲ့ဇုန်ပါ… ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူငယ်ချင်းအဖွဲ့လိုက်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မိသားစုတွေ စုံစုံလင်လင်ဆုံစည်းဖြစ်ကြတဲ့အချိန်ခါလေးမှာ စကားလက်ဆုံပြောဖြစ်စေဖို့ Online မသုံးစေချင်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပြုလုပ်ပေးထားတာဆိုတော့ Idea လေးကောင်းတယ်လို့မြင်တယ်…
အေးဆေးသာယာတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်၊ လေကောင်းလေသန့်တွေကြားမှာ ပုဂံမြို့ကိုရောက် တုန်းရောက်ခိုက် အိန္ဒိယ အစားကောင်းအသောက်ကောင်းများကို စားသောက် မြည်းစမ်း ချင်ကြတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ ပုဂံမြို့ရောက်ရင် ရွေးချယ်ဖို့အသင့်တော်ဆုံး ဆိုင်တစ်ဆိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်…
All Menu 10% Discount နဲ့လာရောက်အသုံးပြုချင်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ B&F Club Card နဲ့သွားရောက်အသုံးပြုပေးရမှာဖြစ်ပြီးတော့ Bill ရှင်းတဲ့အချိန်မှာ တာဝန်ရှိသူတစ်ယောက်ကိုပြပြီးတော့ ရယူနိုင်ပါတယ်…
Address - FIT road Bagan, Mandalay, Burma
PH -09 204 2630
အသေးစိတ်သိရှိလိုတယ်ဆိုရင်တော့ ဖုန်းနံပါတ် 099 69910115, 099 69910128 ကိုရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်...
Promotions Period - 20. Aug . 2019 - 20. Feb . 2020